Umgangatho wezinto zomthi wepaulownia ukhetheke kakhulu, ulunge kakhulu kuluhlu olubanzi lwezicelo. Xa kuthelekiswa neminye imithi, iPaulownia inezi mpawu zilandelayo:
• Ikhaphukhaphu kodwa inzima
Njengomnye wemithi elula kakhulu emhlabeni, malunga ne-40% ilula kunamanye amahlathi. Kwelinye icala, ubunzima bayo buhle kakhulu. Ukukhanya kunye nobulukhuni zezona zinto ziluncedo ziphambili kumthi wepaulownia, ke inokusetyenziselwa ukwenza iimodeli zenqwelomoya, iigobolondo zezixhobo ezichanekileyo, njl.
• Ayigobe, ayitshixeki kwaye igcine ubume bayo
Xa kuthelekiswa neminye imithi, umthi wepaulownia uneempawu “zokungagobi, ukungalwi nokugcina ukumila kwawo”. Iifeni zefeni ezinobungani bendalo kunye nefenitshala eyenziwe ngomthi wepaulownia ziyathandwa yimarike, kwaye akukho nye iinkuni ezinokuthi zithathe indawo yazo.
• Ubungqina bokufuma nokufuma
Inkuni yasePaulownia ineempawu zokumelana nokufuma kunye nokumelana nokufuma, kwaye isenokugcina imeko elungileyo emva kokuba udayiwe. Yimathiriyeli ekumgangatho ophezulu yeenqanawa zabakhweli kunye neebhlukhwe zemoto zabakhweli, ukuthuthwa komoya kunye neebhokisi zokuhambisa amanzi
• Ukuxhathisa umlilo
Ukuqhutywa kwe-thermal kweenkuni ze-paulownia kusezantsi kunezinye iintlobo zeenkuni. Indawo etshisayo yeminye imithi imalunga nama-270 degrees celcius, ngelixa indawo etshisayo yomthi wepaulownia iphakama kangange-425 degrees celcius. Ngexesha lenkqubo yokuhlwayela imbewu, i-paulownia akukho lula ukuyitshisa ngokuzenzekelayo. Ukongeza, inokusetyenziswa njengemathiriyeli yeemveliso zeplanga ezinganyangekiyo ezinobushushu obuphezulu.
Inkuni yasePaulownia ilula kakhulu, kodwa akukho lula ukuyinxiba. Imfutho (isixhobo sakudala somlilo sase China) esenziwe ngomthi we paulownia akukho lula ukuba siphelelwe nakunyibilikiswa ngapha nangapha ngentonga yokutsala.
• Umbala omhle, umbala oqaqambileyo
Ubume bokhuni lwepaulownia bulungile, ukukhanya okujikelezayo kunye nemodeli yendalo zilungile. Yinto efanelekileyo efanelekileyo yefanitshala, izinto zokubhala kunye nezixhobo zemidlalo.
• Kulula ukukrola nokudaya
Inkuni yasePaulownia kulula ukuyikrola kunye nedayi, akukho lula ukwahlulahlula, umgangatho weenkuni uthambile, ulungele ukuqhubekeka, ukukrola kunye nokudaya. Yinto ekhethekileyo kwiphepha eliphezulu kunye nemisebenzi yezandla.
• Ukutya okuxinisa umoya kunye nokuthintela iintshulube
Kubomi bemihla ngemihla babantu baseTshayina, kulisiko ukusebenzisa izikhongozeli zeenkuni zepaulownia ukugcina iinkozo, eziza kukhusela iinkozo kufuma, ukungunda kunye neentshulube ixesha elide.